क्यान्सर भगाउने सजिलो घरेलु तरिका पोलेको मकै सबैको जानकारीको लागि सेयर गरौ | SwasthyaNews.Com Nepal's Leading Health News Portal
सुचना विभाग दर्ता नं. ३४/०७३-७४
नेपालमा वार्षिक ४५ अर्बको औषधि कारोवार
७ र ८ गते प्रत्यारोपण सम्मेलन हुने
शिवरात्री र महायज्ञको अवसरमा महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा निशुल्क पिउनेपानि
पेटको दुखाई निको गर्ने ४ घरेलु तरिका
स्तन क्यान्सरका लक्षण र कारणहरु
‘ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरसीप’ सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागि हुन मन्त्री यादव दिल्लीमा
सडक दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्काल उपचार सेवा दिन ‘हाइवे ट्रमा घुम्ती अस्पताल’
सुदूरपश्चिममा ३ सय नयाँ कुष्ठरोगी फेला, खोजपड्ताल अभियान थालिँदै
आप्रवासका क्रममा हुने स्वास्थ्य जोखिम रोक्न छुट्टै नीति ल्याउने तयारी
क्यान्सर भगाउने सजिलो घरेलु तरिका पोलेको मकै सबैको जानकारीको लागि सेयर गरौ
मङ्गलबार, १८ मङि्सर २०७५
कुनै समय यस्तो थियो, पहाडी र हिमाली भेगका सर्वसाधारण खाना होस् वा खाजा सबैमा मकै नै उपभोग गर्थे । त्यतिबेला धानखेत नहुँदा स्थानीय स्तरमा अत्यधिक परिमाणमा उत्पादन हुने मकै हिमाल र पहाडका मानिसको प्रमुख खाद्यान्न थियो । चामल कि त पहुँचवाला कि राम्रै आम्दानी हुनेले चाडबाडमा उपभोग गर्न पाउँथे ।
तर पछिल्लो समय परिवेश बिल्कुलै फेरिएको छ । सडकको पहुँच, क्रयशक्ति र जीवनस्तरमा वृद्धिका कारण पहाडी र हिमाली भेगका बासिन्दाको खाद्यान्नको मुख्य स्रोत मकैको साटो चामल बन्दै गएको छ । पोषण र खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी पौष्टिक खाद्य पदार्थ मकैलाई पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले विस्तारै गाईभैंसी, खसीबोका र कुखुरालाई खुवाउन प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
अहिलेको मौसममा मौसम बदलिरहेको छ । वर्षाको मौसममा तपाईँलाई सबैभन्दा बढी के खान मन पर्छ ? प्रायः जसोले वर्षाको मौसममा तातो–तातो पकोडा, कफी वा चिया खान मन पराउँछन् तर बर्षायाममा पोलेको मकै खानुको छुट्टै आनन्द छ । हामी रहरले पोलेको मकै खाने गर्छौँ ।
किनभने पोलेको मकैको स्वाद नै मिठो हुन्छ । मधुरो आगोमा पोलेको मकैमा नुन र कागती हालेर खाँदा त्यसको स्वाद अझ बढ्छ । तर, कहिल्यै सोच्नु भएको छ पोलेको मकै खानाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कतिको फाइदा हुन्छ भनेररु आयुर्वेदमा मकै खानुको अनेक फाइदा हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
पोलेको मकै खानाले प्यास लागेको बेला पानीको मात्रा पुरा गर्छ । मकै एक यस्तो तत्व हो जसमा पाकेपछि पनि आफ्नो गुण हराउनुको साटो थप बढ्ने गर्छ । पोलेको मकैमा क्यारेटोनोइड र भिटामिन ए को राम्रो स्रोत हुन्छ ।
पोलेको मकै खानुको फाइदा :
– पोलेको मकै खानाले दाँत बलियो हुन्छ ।
-मकै खाइ सकेपछि त्यसको खोयालाई भाँचेर सुँघ्दा रुघाखोकी निको हुन्छ ।
– त्यति मात्र नभई मकैको खोयालाई सुखाएर जलाएर त्यसको धुँवा सुँघ्नाले पनि रुघाखोकीमा फाइदा पुर्याउँछ । त्यसबाहेक यसले खोकी लागेकोमा पनि निको हुन्छ ।
– पोलेको मकैमा पर्याप्त मात्रामा एन्टी–अक्सीडेन्ट पाइन्छ । जसले बढ्दो उमेरको लक्षणलाई रोक्छ र क्यान्सरसँग पनि लड्नमा मद्दत गर्छ ।
-बच्चाहरुको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि पनि पोलेको मकै धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा कोलेस्ट्रोल नगन्य मात्रामा हुन्छ त्यसैले पोलेको मकै खाँदा मुटुपनि स्वस्थ रहन्छ ।
-मकैमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ जसले पाचन क्रियालाई सन्तुलित बनाउँदछ ।
– पोलेको मकैको सेवनले हड्डी मजबुत हुन्छ । मकैमा पर्याप्त म्याग्नेसियम, आइरन, कपर तथा फोस्फोरस पाइन्छ ।
-मकैको सेवनले मृगौला स्वस्थ राख्न पनि सहयोग गर्दछ ।
-पोलेको मकैको सेवनले कब्जियत, अल्सर तथा पेटको क्यान्सरको जोखिम पनि क मगर्दछ ।
-काँचो मकैलाई छोडाएर गेडा पानीमा भिजाउने अनि अर्को दिन उक्त पानीलाई छानेर पानीमा मिश्री मिलाएर खनाले पिसाब पोल्ने जस्ता समस्या कम हुन्छन् ।
-मकैमा भरपूर मात्रामा एन्टी अक्सिडेन्ट पाइने कारणले गर्दा यसको सेवनले हाम्रो छाला कोमल हुनुका साथै रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने र बुढ्यौलीका लक्षण छिटो देखिने समस्या कम हुन्छ । मकैमा भिटामिन सी, क्यारोटिनाइड तथा बायोफ्लेभिनोइड पाइन्छ ।
-मकैको सेवनले रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्नबाट रोक्दछ । यसले रक्तप्रवाहलाई सन्तुलित बनाउने, उच्च रक्तचापको समस्या कम गर्ने तथा मुटुलाई स्वस्थ राख्न सघाउँदछ ।
-गर्भवती महिलाका लागि मकै निकै उत्तम आहार हो । यसमा फोलिक एसिड पर्याप्त पाइने हुनाले गर्भको शिशुका लागि पोषणको पर्याप्त आपूर्ति हुन्छ ।
Swasthya News, Aux Media Pvt. Ltd 2019, © all rights reserved.
सूचना बिभाग दर्ता न. -- 34/073-74
अध्यक्ष / सम्पादक: नरेश प्रसाद लेखक (फोन नं. ९८५११५५२३२ )
समाचार सम्पादक : दामोदर न्यौपाने (सागर) (फोन नं. ९८५१०७८९१३)